Xiaomi ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၄ ရက်နေ့တွင် မွမ်းမံထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းဓလေ့ထုံးစံများအား သိရှိနားလည်နိုင်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ အချိန်ယူ လေ့လာပါ၊ အကူအညီလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Xiaomi Singapore Pte. Ltd. ၊ Xiaomi Technology Netherlands B.V. နှင့် Xiaomi အုပ်စုအတွင်း ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော ကုမ္ပဏီများ (ဤနေရာမှစ၍ "Xiaomi” ၊ "ကျွန်ုပ်တို့” ၊ "ကျွန်ုပ်တို့၏” သို့မဟုတ် "ကျွန်ုပ်တို့ကို” ဟူသော စကားရပ်များဖြင့် ရည်ညွှန်းမည်) မှ သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို အလွန် အလေးအနက်ထားပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီအား သတ်မှတ်ရာတွင် သင်စိတ်တွင်လိုအပ်သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့မှ ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပေါ်လစီကို အပြည့်အဝ နားလည်၍ Xiaomi ထံ ပေးပို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား သင် ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကိုလည်း အထူးတလည် ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ အကြောင်း
လွတ်လပ်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ ထားပေးသည့် သတ်မှတ် Xiaomi ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများမှ လွဲ၍ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီသည် Xiaomi စက်ပစ္စည်းများ၊ ၎င်းကို ရည်ညွှန်းသော သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်မှုရှိသော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ သို့မဟုတ် အက်ပလီကေးရှင်းများ အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီက သင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးထားသည့် သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက် (https://www.mi.com၊ https://en.miui.com၊ https://account.xiaomi.com) နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရာမှ သင့်ထံက ကျွန်ုပ်တို့ ရယူထားသည့် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုမဆို Xiaomi က မည်သို့ စုစည်းရယူသည်၊ အသုံးပြုသည်၊ ထုတ်ဖော်ပြသသည်၊ ပိုင်ဆိုင်သည်၊ ကာကွယ်သည် စသည်တို့ကို ရှင်းပြထားပါသည်။ အကယ်၍ Xiaomi ကုန်ပစ္စည်းက သီးခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ သပ်သပ် ထားသည်ဆိုလျှင်၊ အဆိုပါ သီးခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို ဦးစားပေး ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ပြီး၊ မပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းများသည် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ၏ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာရပါမည်။ ထို့အပြင်၊ သီးခြားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို မည်သို့ စုစည်း ရယူပြီး လုပ်ဆောင်မည်ဆိုသည်မှာ မော်ဒယ်၊ ဝန်ဆောင်မှု ဗားရှင်း သို့မဟုတ် နယ်ပယ်အလိုက် အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်အတွက် သီးခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို ကိုးကားရန် အကြံပြုပါသည်။
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီတွင် "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်"ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် အသိအမှတ်ပြုနိုင်သော အချက်အလက်များကိုဆိုသည်၊ ထိုအချက်အလက်များကို သီးသန့် ရယူနိုင်သလို သင့်နယ်ပယ်ဒေသတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများက သီးခြားပေးထားသည်မှလွဲ၍၊ Xiaomi မှ ဝင်ရောက်နိုင်သော အချက်အလက်မှ တဆင့် ရယူနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီအရသာ တိကျစွာ အသုံးပြုပါမည်။
မည်သို့မဆို သုံးစွဲသူများအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစား ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီတွင် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေတာကိုင်တွယ်မှု အလေ့အထများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစုံတစ်ရာ ဖြစ်လာခဲ့လျှင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်သက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စအတွက် privacy@xiaomi.com ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ သင့်ထံမှ ကြားရမည်ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် မျှော်လင့်ပါသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာများအား ကျွန်ုပ်တို့မှ ကျေနပ်စွာ မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါက https://feedback-form.truste.com/watchdog/request မှတဆင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ(အခမဲ့)သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
၁ မည်သည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်း၍ မည်သို့ အသုံးပြုသနည်း?
၁.၁ ဘယ်အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က စုစည်းရယူသလဲ။
သင့်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်ထံ ယင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တောင်းခံပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အချက်အလက် စုစည်းရယူရာတွင် ၎င်း ၏ သတ်မှတ်ထားသော၊ ခိုင်လုံသော၊ ပြည့်စုံရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသော လိုအပ်သည့် အချက်အလက်ကိုသာ စုစည်း ရယူမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မသက်ဆိုင်သော ပြုမူ ဆောင်ရွက်မှုမျိုး မလုပ်ဆောင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုသည့် အချက်အလက်ကို ပေးရန် မပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခွင့် သင့်တွင်ရှိပါသည်၊ သို့သော် ကိစ္စရပ် အတော်များများတွင် အကယ်၍ သင်က သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်ကို မပေးလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ သို့မဟုတ် သင့်မေးမြန်းမှုများကို ပြန်ကြားပေးနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သင်ရွေးချယ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက် အမျိုးအစားများကို စုစည်းရယူပါမည်-
၁.၁.၁ သင်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေးသည့် အချက်အလက်
သင်ရွေးချယ်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် သင် ပေးသည့် မည်သည့် အချက်အလက် ကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူပါမည်။ ဥပမာ- သင့်အနေဖြင့် သင့်အမည်၊ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ် လိပ်စာ၊ ပို့ရမည့်လိပ်စာ၊ အမှာစာ၊ ကျသင့်ငွေဖြတ်ပိုင်း အသေးစိတ်၊ ဘဏ်အကောင့်နံပါတ်၊ အကောင့်ပိုင်ဆိုင်သူအမည်၊ အကယ်၍သင် mi.com လက်လီဖြန့်ချီရေး ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုလျှင် အကြွေး ဝယ်ကဒ်နံပါတ် နှင့် အခြား အချက်အလက်များ၊ သင့်အနေဖြင့် Xiaomi ကလောက် ဝန်ဆောင်မှုများသုံးလျှင် အကြောင်းအရာများ သို့မဟုတ် ဒေတာများကို ချိန်ကိုက်ညှိကောင်းညှိနိုင်ပါသည်၊ သင် အကောင့်တစ်ခု ဖန်တီးသည့်အခါ သင့်အနေဖြင့် ကျား/မ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ သင်၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် နှင့် အခြား အချက်များကို ပေးရပါလိမ့်မည်၊ MIUI ဖိုရမ် သို့မဟုတ် အခြား Xiaomi ပလက်ဖောင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့လျှင် သင်၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု များနှင့် ပတ်သက်သည့် သင်၏လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်၊ ပညာရေးနှင့် အခြားသော အချက်အလက်များကို ပေးရပါလိမ့်မည်။
၁.၁.၂ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင် အသုံးပြုရာမှ ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူသည့် အချက်အလက်
• ကိရိယာ သို့မဟုတ် SIM-ဆက်စပ် အချက်အလက် ဥပမာ- IMEI နံပါတ်၊ GAID နံပါတ်၊ IMSI နံပါတ်၊ MAC လိပ်စာ၊ ကုန်ထုတ်စဉ်နံပါတ်၊ MIUI ဗားရှင်းနှင့် အမျိုးအစား၊ ROM ဗားရှင်း၊ Android ဗားရှင်း၊ Android ID ၊ Space ID၊ SIM ကဒ် အော်ပရေတာ နှင့် ၎င်း၏ တည်နေရာ ဧရိယာ၊ စခရင်တွင် ဖော်ပြသည့် အချက်အလက်၊ ကိရိယာ ကီးပက် အချက်အလက်၊ ကိရိယာ ထုတ်လုပ်သူ အသေးစိတ် နှင့် မော်ဒယ်အမည်၊ ကိရိယာ စတင်အသက်သွင်းသည့်အချိန်၊ ကွန်ရက်အော်ပရေတာ၊ ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်မှု အမျိုးအစား၊ အခြေခံ ဟာ့ဒ်ဝဲလ် အချက်အလက်နှင့် သုံးစွဲ အချက်အလက် (CPU၊ သိမ်းဆည်းနေရာ၊ ဘက်ထရီ သုံးစွဲမှု၊ စခရင် ကြည်လင်မှု နှင့် ကိရိယာ အပူချိန်၊ ကင်မရာ မှန်ဘီလူး မော်ဒယ်များ စသဖြင့်)။
• တတိယပါတီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ နှင့် စီးပွားရေး ပါတနာများက ချမှတ်ထားသည့် သင်နှင့်ဆိုင်သည့် သီးခြား အချက်အလက်: ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်ကြော်ငြာထားသည့် တတိယပါတီ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ နှင့် စီးပွားရေး ပါတနာများက ချမှတ်ထား သည့် ID အစရှိသည်တို့ကို စုစည်းရယူပြီး အသုံးပြုပါမည်။
• သင့်အက်ပလီကေးရှင်း သုံးစွဲမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက် အပလီကေးရှင်း အခြေခံ အချက်အလက်အပါအဝင်၊ အပလီကေးရှင်း စာရင်း၊ အပလီကေးရှင်း ID အချက်အလက်၊ SDK ဗားရှင်း၊ စနစ် မွမ်းမံမှု ဆက်တင်များ၊ အပလီကေးရှင်း ဆက်တင်များ (နယ်ပယ်၊ ဘာသာစကား၊ အချိန်ဇုံ၊ စာလုံးဖောင့်) နှင့် အပလီကေးရှင်း အခြေအနေ မှတ်တမ်း (ဥပမာ- ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်း နှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း)
• ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ ထွက်လာသည့် အချက်အလက် ဥပမာ သင်၏ တံဆိပ်များ၊ အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ချက်များ၊ ဆိုင်းအင် အချက်အလက်နှင့် MIUI ဖိုရမ် ဝန်ဆောင်မှုတွင် လျှောက်ကြည့်ထားသည့် မှတ်တမ်းများ၊ MIUI ဖိုရမ်ပေါ်ရှိ သင်၏စာများ (ပို့သည့်ဖက်နှင့် လက်ခံသည့်ဖက် အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့စလုံးကသာ မြင်နိုင်သော)၊ Mi push ဝန်ဆောင်မှု သုံးသည့်အခါ ထုတ်ပေးသည့် push အကြောင်းအရာ၊ ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သင်၏ အမူအကျင့် (ဥပမာ ကလစ်နှိပ်ခြင်း၊ လျှောက်ကြည့်ခြင်း၊ စသဖြင့်)
• တည်နေရာ အချက်အလက် (သီးခြားဝန်ဆောင်မှုများ/လုပ်ငန်းများ အတွက်သာ) အကယ်၍ သင် တည်နေရာ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုလျှင် သင်၏တိကျသည့် သို့မဟုတ် အနီးစပ်ဆုံး တည်နေရာ ပေါ်ရှိ အမျိုးမျိုးသော အချက်အလက် (လမ်းကြောင်းပြ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ မိုးလေဝသ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ကိရိယာတည်နေရာပြ လုပ်ငန်းပါဝင်သည့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်) ဥပမာ- နိုင်ငံဒေသ၊ နိုင်ငံကုဒ်၊ မိုဘိုင်း ကွန်ရက်ကုဒ်၊ မိုဘိုင်း နိုင်ငံကုဒ်၊ လောင်ဂျီတွဒ်နှင့် လတ္တီတွဒ် အချက်အလက်၊ အချိန်ဇုံ ဆက်တင်၊ ဘာသာစကား ဆက်တင် စသည်တို့ ပါဝင်မည်။ သင့်အနေဖြင့် အက်ပလီကေးရှင်း တစ်ခုစီအလိုက် သင်၏ တည်နေရာ အချက်အလက်ကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဖုန်းဆက်တင်များတွင် (ဆက်တင်များ-ခွင့်ပြုချက်များ) ပိတ်နိုင်သည်။
• မှတ်တမ်း အချက်အလက်- သင်သုံးစွဲသည့် လုပ်ဆောင်ချက်၊ အက်ပ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် အချို့နှင့် စပ်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ဆိုလိုသည်။ ဥပမာ ကွတ်ကီးများ နှင့်အခြား အမည်မသိ သက်သေခံ နည်းပညာများ၊ အိုင်ပီလိပ်စာ၊ ကွန်ရက်တောင်းဆိုသည့် အချက်အလက်၊ ယာယီစာတိုမှတ်တမ်း၊ စံစနစ် မှတ်တမ်းများ၊ ပျက်စီးမှု အချက်အလက်၊ ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုခြင်းမှ ထွက်လာသည့် မှတ်တမ်း အချက်အလက် (မှတ်ပုံတင်သည့်အချိန်၊ ဝင်ရောက်အသုံးပြုသည့် အချိန်၊ လှုပ်ရှားသည့် အချိန် စသဖြင့်)
• အခြား အချက်အလက်- ပတ်ဝန်းကျင် လက္ခဏာ စံနှုန်း (ECV) (တနည်းအားဖြင့် Mi အကောင့်၊ စက် အိုင်ဒီ၊ ချိတ်ဆက်ထားသော Wi-Fi အိုင်ဒီနှင့် တည်နေရာအချက်အလက်တို့ကို ဆိုလိုသည်)။
၁.၁.၃ တတိယပါတီ အရင်းအမြစ်များမှ အချက်အလက်
ဥပဒေက ခွင့်ပြုသည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တတိယပါတီ အရင်းအမြစ် များမှ သင့်အကြောင်း အချက်အလက်ကို စုစည်းရယူမည်။ ဥပမာ
• အကောင့်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကျွုန်ပ်တို့သည် သင်ပေးသည့် အချက်အလက်ကို တရားဝင် တတိယပါတီအရင်းအမြစ်များမှတဆင့် လုံခြုံရေးနှင့် အယောင်ဆောင် လိမ်လည်မှုမှ ကာကွယ်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် မှန်ကန်မှုကို စစ်ဆေးမည်။
• ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်ကို ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် သတ်မှတ်ထားသည့် သက်သေခံ သင်္ကေတများ (ကြော်ငြာသူထံမှ IMEI အစရှိသဖြင့်) ကို လက်ခံရရှိမည်။
• ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တတိယပါတီ လူမှုကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုများမှ အကောင့် ID များနှင့် နာမည်ပြောင်များ စသည့် အချက်အလက်များကိုလည်း ရယူမည် (ဥပမာ- Xiaomi ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုသို့ ဆိုင်းအင်ဝင်ရန် လူမှုကွန်ရက် အကောင့်တစ်ခု သင် သုံးသည့်အခါ)
• အခြားသူများကကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသည့် သင့်အကြောင်းအချက်အလက် (ဥပမာ - အခြားအသုံးပြုသူများ က mi.com ဝန်ဆောင်မှုများမှတဆင့် သင့်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူသည့်အခါပစ္စည်းပို့ရန် သင်၏ လိပ်စာကို ပေးခြင်း)
၁.၁.၄ သက်သေမခံနိုင်သည့် အချက်အလက်
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသ ဥပဒေများအရ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အဖြစ် သက်သေမခံနိုင်သည့် တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်ချိတ်ဆက်မှုမရှိသည့် အခြားသော အချက်အလက် အမျိုးအစားများကိုလည်း စုစည်းရယူပါမည်။ အဆိုပါ အချက်အလက်များတွင် သင် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကို အသုံးပြုသည့်အခါ ထွက်လာသည့် ကိန်းဂဏန်း ဒေတာများ ပါဝင်သည် (ဥပမာ- သက်သေမခံနိုင်သည့် ကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက် အလက်၊ နေ့စဉ်သုံးစွဲသည့် ဖြစ်ရပ်များ၊ စာမျက်နှာ ဝင်ရောက် အသုံးပြုမှု ဖြစ်ရပ်များ၊ စာမျက်နှာ ဝင်ရောက် အသုံးပြုသည့်အချိန် ဖြစ်ရပ်များ နှင့် ဆက်ရှင်များ)၊ ကွန်ရက် စောင့် ကြည့် ဒေတာများ (ဥပမာ- တောင်းဆိုသည့် အချိန်၊ တောင်းဆိုမှုအရေအတွက် သို့မဟုတ် အမှားယွင်းအတွက် တောင်းဆိုမှု၊ စသဖြင့်)၊ အက်ပလီကေးရှင်း ပျက်စီးမှု ဖြစ်ရပ်များ။ ထိုကဲ့သို့ စုစည်းရယူခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အားပေး နေသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ စုစည်းရယူသည့် အချက်အလက် အမျိုးအစားနှင့် ပမာဏမှာ သင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု များကို မည်သို့အသုံးပြုသည် ဆိုသည့်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မတူသည့် ကိရိယာ သက်သေခံများ၊ ကိရိယာ မော်ဒယ်များ၊ စနစ် ဗားရှင်းနံပါတ်များ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အက်ပ်ပေါ်ရှိ သင်၏ လှုပ်ရှားမှုများအကြောင်း အချက်အလက် အစရှိသဖြင့်တို့ကို စုစည်းရယူမည်။ ကျွန်ုပ်တို့က အဆိုပါ အချက်အလက်များကို စုပေါင်းပြီး သင့်အား ပိုမိုအသုံးဝင်သည့် အချက်အလက်၊ ပိုမိုနားလည်နိုင်သည့် သင်စိတ်အဝင်စားဆုံး ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များပေးသည်။ အဆိုပါ စုပေါင်းထားသည့် ဒေတာသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်မဟုတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကိုသုံးပြီး သင့်ကို သက်သေခံ၍မရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် မဟုတ်သည် နှင့် ပုဂ္ဂိုလ် ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ပူးပေါင်းလျှင် အဆိုပါ အချက် အလက်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အဖြစ် မှတ်ယူမည်။
၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့ စုစည်းရယူထား သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုသုံးမလဲ
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုစည်းရယူသည့် ရည်ရွယ်ချက် မှာ သင့်ကို ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်/ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင် မှုများပေးပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများနှင့် အခြားသော ထိန်းသိမ်းရန် အာဏာ အပ်နှင်းထားသည့် လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာသည်မှာ သေချာစေရန် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ပါဝင်သည်များမှာ -
• သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင် မှုများ ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများ, ဥပမာ - ပစ္စည်းပို့ခြင်း၊ အသက်သွင်းခြင်း၊ မှန်ကန်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ အရောင်းနောက်ဆက်တွဲ ဝန်ဆောင်မှု၊ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူ အကူအညီ နှင့် ကြော်ငြာ။
• ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် အယောင်ဆောင် လိမ်လည်မှုများမှ ကာကွယ်တားဆီးရန် လုံခြုံရေးအစီအမံများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း ဥပမာ - သုံးစွဲသူများ သက်သေခံစစ်ဆေးခြင်းတွင် ကူညီခြင်း၊ သုံးစွဲသူ သက်သေခံအမှတ် မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးခြင်း။ သင့်အချက်အလက်ကို အယောင်ဆောင်လိမ်လည်မှုမှ ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သာ အောက်ပါ အခြေအနေ နှစ်ရပ်နှင့် ကိုက်ညီသည့်အခါ အသုံးပြုပါသည်: လိုအပ်လာခဲ့လျှင်၊ နှင့် ဥပဒေကြောင်းအရ Xiaomi က သုံးစွဲသူများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကာကွယ်ရန် အတွက် အကဲဖြတ်ရန် အတွက် ဒေတာကို အသုံးပြုပါသည်။
• သင်၏ စက်ကိရိယာများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ မေးခွန်းများ သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုများအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း ဥပမာ - ဝယ်ယူသူ မေးမြန်းမှုများအား ဖြေကြားပေးခြင်း၊ စနစ်နှင့် အပလီကေးရှင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားမှုများ ပေးပို့ခြင်း၊ အောင်ဘာလေထီထိုးခြင်း ကဲ့သို့သော သင်၏ လှုပ်ရှားမှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
• သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းမြှင့်တင်မှု ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဥပမာ - ဈေးကွက်ရှာခြင်းနှင့် အရောင်းမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများ နှင့် မွမ်းမံမှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် အဆိုပါ အရောင်းမြှင့်တင်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို လက်ခံလိုခြင်းမရှိတော့လျှင်၊ သင့်အနေဖြင့် စာတိုတွင် ပေးထားသည့် ရှောင်ဖယ် သည့် နည်းလမ်းကို သုံးနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ - သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေတွင် သီးခြားဖော်ပြထားခြင်းမျိုးမရှိလျှင် စာတို အောက်ခြေရှိ မမှာယူတော့ပါ လင့်ခ် မျိုး) ကျေးဇူးပြု၍ “သင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ” ကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ။
• ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် အကြောင်းအရာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း သင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအသုံးပြု သည့်အခါ ထွက်လာသည့် ဈေးဝယ် မှတ်တမ်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက် လျှောက်ကြည့်မှတ်တမ်းနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင် တည်နေရာ စသည့် အချက်အလက်များပေါ် အခြေခံ၍ ကြော်ငြာခြင်း အပါအဝင် - ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ကုန်ထုတ်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ခံအကြံပြုမှု လုပ်ပါမည်။ တိုက်ရိုက်ဈေးကွက်ရှာရန်ရည်ရွယ်ချက်များ အပါအဝင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ကြော်ငြာများ လက်ခံရရှိခြင်း နှင့် ပရိုဖိုင်တွဲခြင်း တို့ကို အချိန်မရွေး ရှောင်ဖယ်ခွင့် သင့်တွင် ရှိပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် သင့်အနေဖြင့် ဖုန်းဆက်တင်များတွင် အချိန်မရွေး ၎င်းကို ဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ် လုပ်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်တင်များ - ထပ်တိုး ဆက်တင်များ - ကိုယ်ရေးအချက်အလက် - ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုများ) သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ကို privacy@xiaomi.com ဖြင့် ဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ “သင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ” ကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ။
• အများသုံး ဖိုရမ်များတွင် သင့်အား ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်များ တင်ခွင့် ပြုခြင်း။
• အတွင်းပိုင်း ရည်ရွယ်ချက်များ ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြု ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာ ဒေတာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရန်။ ဥပမာ- ကွန်ပျူတာက လေ့လာသင်ယူခြင်း သို့မဟုတ် မော်ဒယ် အယ်လ်ဂိုရစ်သမ် လေ့ကျင့်ခြင်းကို သက်သေခံသတ်မှတ်မှု ပြန်လည် ပယ်ဖျက်ပြီးသည့်အခါ လုပ်ဆောင်သည်။
• သင့်စက်ကိရိယာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အသင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဥပမာ သင့်အပလီကေးရှင်း၏ မန်မိုရီ သုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် CPU သုံးစွဲမှု အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
• ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေး လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် သင်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက် သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း (ဥပမာ- စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများ) သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပဒေကြောင်းအရ တာဝန်ယူမှုကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်။
• စက်ကိရိယာအတွင်း ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း သင့်ကိရိယာပေါ်တွင် မှတ်စုမှတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ သုံးခြင်း ကဲ့သို့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာများနှင့် ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်စရာမလိုသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်း။
• သင်၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်များ
သင်၏အချက်အလက် (ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပါနိုင်ခြေရှိသည်) နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် ဥပမာများဖြင့် အသုံးပြုပုံ-
• သင်ဝယ်ယူထားသည့် Xiaomi ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်အတွက် အသက်သွင်းခြင်း နှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း။
• Mi အကောင့် ဖွင့်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းစက်များမှတဆင့် Mi အကောင့် ဖွင့်သောအခါ စုဆောင်းသော သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ကိုယ်ပိုင် Mi အကောင့်နှင့် ပရိုဖိုင်စာမျက်နှာများ ဖန်တီးရန်အတွက် အသုံးပြုပါမည်။
• သင်၏ ဈေးဝယ်အမှာစာကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း e-commerce အမှာစာ နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို ဈေးဝယ် အမှာစာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင် သုံးစွဲသူ အကူအညီနှင့် ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းအပါအဝင် ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်ပတ်သက်သည်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတွင် သုံးသည်။ ထို့အပြင်၊ အမှာစာ နံပါတ်ကို ပစ္စည်းပေးပို့သည့် ပါတနာ နှင့် အပြန်အလှန် စစ်ဆေးရာတွင် သုံးမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ ပါဆယ် ပစ္စည်းပို့ ထားမှု မှတ်တမ်းအဖြစ်သိမ်းရာတွင် သုံးပါမည်။ အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နှင့် စာပို့သင်္ကေတ အပါအဝင် လက်ခံသူ၏ အချက်အလက်ကို ပစ္စည်းပို့ရန်အတွက် သုံးပါမည်။ သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို သင့်ထံ ပါဆယ်ပို့သည့်အခါ မည်သည့်နေရာတွင် ရောက်နေသည်ဆိုသည့် ခြေရာကောက် အချက်အလက်ပို့ရန် သုံးသည်။ ဝယ်ယူထားသည် ပစ္စည်းစာရင်းကို ဈေးဝယ်ဖြတ်ပိုင်း ပရင့်ထုတ်ရန်နှင့် ဈေးဝယ်သူက ပါဆယ်ထဲတွင် မည်သည့် ပစ္စည်း များပါသည်ကို ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် သုံးသည်။
• MIUI ဖိုရမ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန်။ MIUI ဖိုရမ်နှင့် အခြား Xiaomi အင်တာနက် ပလက်ဖောင်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား ပရိုဖိုင်စာမျက်နှာ ဖန်တီးခြင်း၊ အခြား သုံးစွဲသူများနှင့် အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖိုရမ်တွင် ပါဝင်ခြင်း စသည်တို့တွင် အသုံးပြုပါမည်။
• Xiaomi ကလောက်နှင့် MIUI ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက် - (ကိရိယာ သို့မဟုတ် SIM ကဒ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်၊ GAID နံပါတ်၊ IMEI နံပါတ်၊ IMSI နံပါတ်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ကိရိယာ ID၊ ကိရိယာ လည်ပတ်လုပ်ဆောင် စနစ်၊ MAC လိပ်စာ၊ ကိရိယာအမျိုးအစား၊ စနစ်နှင့် လုပ်ဆောင် နိုင်စွမ်း အချက်အလက် အပါအဝင်နှင့်၊ မိုဘိုင်း နိုင်ငံကုဒ်၊ မိုဘိုင်း ကွန်ရက်ကုဒ်၊ တည်နေရာ ဧရိယာကုဒ် နှင့် ဆဲလ် သက်သေခံ အပါအဝင် တည်နေရာ အချက်အလက်များ) ကို MIUI ဝန်ဆောင်မှု အသက်သွင်းရာတွင် သုံးပါသည်။ ဥပမာ - Xiaomi ကလောက်၊ ဖုန်းခေါ်မှတ်တမ်း ချိန်ကိုက်ညှိခြင်း၊ SMS ချိန်ကိုက်ညှိ၊ ကိရိယာရှာရန်၊ သုံးစွဲသူ စစ်မှန်ကြောင်း အထောက်အထားပြခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှု အသက်သွင်းခြင်းများ အတွက်။
• အသက်သွင်းရာတွင် မအောင်မြင်သောအခါ ချွတ်ယွင်းချက်ရှာဖွေရန်။ တည်နေရာ အချက်အလက်ဖြင့် ဆင်းမ်ကဒ် အသက်သွင်းရာတွင် မအောင်မြင်သော အကြောင်းရင်း (ဥပမာ- စာတိုဝန်ဆောင်မှု (SMS) ဂိတ်ဝေးနှင့် ကွန်ရက်ချွတ်ယွင်းချက်)အား သုံးသပ်ပြီး ထိုဝန်ဆောင်မှု၏ ကွန်ရက် အော်ပရေတာသို့ ချွတ်ယွင်းချက်ကို အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
• အခြားသော MIUI ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း MIUI ဝန်ဆောင်မှုက စုစည်းရယူထားသည့် အချက်အလက်ကို ဝန်ဆောင်မှုအား အသင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းကဲ့သို့ ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်ချက်များ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် သုံးပါသည်။ ဥပမာ MIUI ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်နေသည့် လှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည့် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း၊ မွမ်းမံခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း။ ဥပမာ- သင်းမ်စတိုးမှ စုစည်းရယူထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက် သည် သင်၏ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းနှင့် လျှောက်ကြည့်ထားသည့် မှတ်တမ်း ပေါ်အခြေခံပြီး ကိုယ်ပိုင် သင်းမ်အဖြစ် ထောက်ခံအကြုံပြု ဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ပေးသည်။
• သင်၏ ကိရိယာ ရှာဖွေခြင်း အကယ်၍ သင့်ဖုန်းပျောက်လျှင် သို့မဟုတ် အခိုးခံရလျှင်၊ Xiaomi ၏ ကိရိယာရှာရန် အင်္ဂါရပ်က သင့်ဖုန်းကို ရှာဖွေရာတွင်၊ လုံခြုံအောင်လုပ်ရာတွင် ကူညီနိုင်ပါသည်။ သင့်ဖုန်းမှ ပေးပို့သော တည်နေရာအချက်အလက်ဖြင့် ဖုန်းတည်နေရာအား မြေပုံပေါ်တွင် ရှာပြီး ဖုန်းထဲရှိ အချက်အလက်ကို ဖျက်ပစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ဖုန်းကို လော့ခ်ချနိုင်သည်။ သင့်ဖုန်းကို တက်ကြွစွာ ရှာဖွေသည့်အခါ၊ တည်နေရာ အချက်အလက်ကို သင့်မိုဘိုင်း ကိရိယာမှ ဖမ်းယူသည်။ အချို့သော အခြေအနေတွင် ဤအချက်အလက်ကို ဆဲလ်တာဝါများ သို့မဟုတ် Wi-Fi ဟော့စပေါ့များမှ ရရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့် ဖုန်းဆက်တင်များအတွင်း အင်္ဂါရပ်များကို အချိန်မရွေး ဖွင့် သို့မဟုတ် ပိတ် နိုင်ပါသည်။ (ဆက်တင်များ- Mi အကောင့် - Xiaomi ကလောက် - ကိရိယာရှာရန်)
• ဓာတ်ပုံတွင် တည်နေရာအချက်အလက် မှတ်သားရန်။ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူသောအခါ ဓာတ်ပုံတွင် တည်နေရာအချက်အလက်အား မှတ်သားနိုင်ပါသည်။ ဤအချက်အလက်အား ဓာတ်ပုံ ဖိုလ်ဒါ အတွင်းတွင် ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဓာတ်ပုံ၏ ဂုဏ်သတ္တိအချက်အလက်တစ်ခုအဖြစ် ထည့်သွင်းထားပါမည်။ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ယူသောအခါ ဓာတ်ပုံတွင် တည်နေရာအချက်အလက်အား မမှတ်သားလိုပါက ကင်မရာဆက်တင်တွင် အချိန်မရွေး ပိတ်နိုင်ပါသည်။
• စာတိုပို့ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် ပံ့ပိုးပေးခြင်း (ဥပမာ Mi ပြောဆိုမှု၊ Mi စာတို) အကယ်၍ သင် Mi ပြောဆိုမှုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး သုံးလျှင် Mi ပြောဆိုမှုက စုစည်းရယူထားသည့် အချက်အလက်ကို ဤဝန်ဆောင်မှု အသက်သွင်းခြင်းနှင့် သုံးစွဲသူ သက်သေခံစစ်ခြင်းနှင့် စာတိုလက်ခံသူ သက်သေခံစစ်ခြင်းတို့အတွက် သုံးပါမည်။ ထို့အပြင်၊ စကားစမြည်ပြော မှတ်တမ်းကို သုံးစွဲသူက အက်ပ်များ ပြန်လည်ထည့်သွင်းသည့်အခါ သို့မဟုတ် စက်ကိရိယာများအကြား ချိန်ကိုက်ညှိမှုလုပ်သည့်အခါ အဆိုပါ စကားစမြည်ပြော မှတ်တမ်းကို ပြန်လည်ဆွဲတင်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန်အတွက် သိမ်းဆည်းထားပေးပါသည်။ အချက်အလက်(ပို့သူ နှင့် လက်ခံသူ၏ ဖုန်းနံပါတ်များနှင့် Mi စာတို ID များ) တို့ကို စာတိုများ လမ်းကြောင်းပေးခြင်းအပါအဝင် ဝန်ဆောင်မှု များကို လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် ဝန်ဆောင်မှုများအား အသက်သွင်းခြင်းနှင့် ဖွင့်ခြင်းဆိုင်ရာ Mi စာတို ပေးပို့ခြင်းအတွက် သုံးပါမည်။
• တည်နေရာကို အခြေခံသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်း MIUI ဝန်ဆောင်မှုများတွင် တည်နေရာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ က သို့မဟုတ် တတိယပါတီ ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများ နှင့် စီးပွားရေး ပါတနာများက (အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုလျှင် “သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ မျှဝေသည်၊ လွှဲပြောင်းသည် နှင့် လူအများကို မည်သို့ ပြသသည်”ကို အောက်တွင် ကြည့် ပါ) သင့်ကို မှန်ကန်သည့်ဝန်ဆောင်မှု ဗားရှင်း ပေးရန်နှင့် သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံ တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးရရှိရန်အတွက် အဆိုပါတည်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် တိတိကျကျ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် အသုံးပြုပါမည်။ ဥပမာ မိုးလေဝသသတင်း အသေးစိတ်၊ တည်နေရာ ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှု (Android ပလက်ဖောင်း၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအနေဖြင့်) သင့်အနေဖြင့် တည်နေရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆက်တင်များတွင် ပိတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အက်ပ်တစ်ခုဖြင့် တည်နေရာ ဝန်ဆောင်မှုများ သုံးစွဲခြင်းကို အချိန်မရွေး ပိတ်နိုင်သည်။
• သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်။ စွမ်းဆောင်ရည်အချို့ (ဥပမာ- သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ ပရိုဂရမ်)အား ဖုန်းနှင့် MIUI ဝန်ဆောင်မှု အသုံးပြုပုံကို စိစစ်လေ့လာရန် ခွင့်ပြုမည်။ ထိုသို့ ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်၊ ဥပမာ- ဖောက်ယွင်းမှု အစီရင်ခံစာ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ကူညီမည်။
• သင့်အား လုံခြုံရေး စင်တာ အသုံးပြုခွင့် ပေးခြင်း စုစည်း ရယူထားသည့် အချက်အလက်ကို လုံခြုံရေးနှင့် လုံခြုံရေးအက်ပ်ရှိ စနစ်ဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို အမြဲဖွင့်ထားနိုင်ရန်၊ လုံခြုံရေး စကင်ဖတ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီ ချွေတာမှု၊ တားမြစ်စာရင်း၊ ရှင်းလင်းရေး ကိရိယာ၊ စသဖြင့် တို့ အတွက် သုံးပါမည်။ ဤလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများထဲမှ တစ်ချို့ကို တတိယပါတီ ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူများ နှင့်/သို့မဟုတ် စီးပွားရေး ပါတနာများက (အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုလျှင် “သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ မျှဝေသည်၊ လွှဲပြောင်းသည် နှင့် လူအများကို မည်သို့ ပြသသည်”ကို အောက်တွင် ကြည့်) လုပ်ဆောင်ပါသည်။ အချက်အလက် (ဗိုင်းရပ်စ် အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက် စာရင်းများ ကဲ့သို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် မဟုတ်သည်များ) ကို လုံခြုံရေး စကင်ဖတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများအတွက် သုံးပါသည်။
• push ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းMi အကောင့် ID နှင့် GAID/IMEI နံပါတ်များကို Xiaomi push ဝန်ဆောင်မှုများပေးပြီး၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ် မွမ်းမံမှုများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအသစ် ကြေညာချက်များ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအကြောင်း အချက်အလက်များအပါအဝင် တို့ကို MIUI မှ ကြော်ငြာနိုင်စွမ်းနှင့် အကြောင်းကြားစာပို့နိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်ရန် အတွက်လည်း အသုံးပြုပါမည်။ ထို့အပြင်၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် တတိယပါတီများ၏ ရွေးချယ်မှုဖြင့် (သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ထိန်းချုပ်ထားသူများလည်း ဖြစ်သည် - အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုလျှင် “သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ မျှဝေသည်၊ လွှဲပြောင်းသည်နှင့် လူအများကို မည်သို့ ပြသသည်”ကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ) Xiaomi push ဝန်ဆောင်မှုသည် သင်၏ Mi အကောင့် ID နှင့် MIUI မှ IMEI နံပါတ်များသုံးပြီး ကြော်ငြာနိုင်စွမ်း သို့မဟုတ် အကြောင်းကြား စာပို့နိုင်စွမ်းကို အကဲဖြတ်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့်/သို့မဟုတ် တတိယပါတီများက ရွေးချယ်ထားသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ ကြော်ငြာနှင့် ပံ့ပိုးပေးမှုဆိုင်ရာ push စာတိုများ သင့်ထံ ပို့ရန်အတွက် အသုံးပြုပါမည် (ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအတွင်း စာတိုပို့ခြင်းဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြင့် သို့မဟုတ် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပို့ခြင်း ဖြစ်စေ) သင့်အနေဖြင့် ဆက်တင်များအောက်ရှိ သင်၏နှစ်သက်မှုများကို ပြောင်းခြင်း၊ သို့မဟုတ် Xiaomi push သုံးပြီး တတိယပါတီ အက်ပ်/ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် နှစ်သက်မှုများကို ပြောင်းခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တတိယပါတီများထံမှ ဈေးကွက်ရှာ ဖွေခြင်းများ လက်ခံနေရခြင်းကို ရှောင်ဖယ်နိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ “သင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ” ကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ။
• သုံးစွဲသူ သက်သေခံ အား မှန်ကန်မှုစစ်ဆေးခြင်းXiaomi သည် သုံးစွဲသူသက်သေခံ မှန်ကန်မှု စစ်ဆေးရန်နှင့် အခွင့်မရှိသူများ မဝင်ရောက်စေရန် ECV တန်ဖိုးကို အသုံးပြုသည်။
• သုံးစွဲသူ တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်အား စုဆောင်းမည်။ သင် ရွေးချယ်တင်ပြသော တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Xiaomi ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အလွန်အကျိုးပြုပါသည်။ သင်၏ တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်အား ဖြေရှင်းပေးရန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖြင့် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် သင့်ထံ ဆက်သွယ်ပြီး မှတ်တမ်းကိုလည်း သိမ်းဆည်းထားပါမည်။
• အသိပေးချက်များ ပေးပို့မည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များဖြင့် ငွေပေးချေမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းချက်နှင့် ပေါ်လစီ ပြောင်းလဲမှုများ အပါအဝင် အရေးကြီးသော အသိပေးချက်များကို ပေးပို့ပါမည်။ အဆိုပါ အချက်အလက်သည် သင် Xiaomi နှင့် အပြန်အလှန် ဆက်သွယ်သည့်အခါတွင် အရေးပါသည့်အတွက် သင်အဆိုပါ အချက်အလက်ကို လက်ခံရန် ငြင်းပယ်ခြင်းအား မထောက်ခံပါ။
• ပရိုမိုးရှင်းများ လုပ်ရန်။ Xiaomi လူမှုရေး မီဒီယာမှတဆင့် ကံစမ်းမဲ၊ ပြိုင်ပွဲစသည့် ပရိုမိုးရှင်းများတွင် ပါဝင်ပါက ထိုပရိုဂရမ်များအား စီမံခန့်ခွဲရန် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အား သုံးနိုင်ခြေရှိသည်။
• သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံ ပိုကောင်းအောင် သင့်စက်အား စိစစ်လေ့လာရန်။ Xiaomi သည် ဟာ့ဒ်ဝဲလ်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ်တို့အား စိစစ်လေ့လာပြီး သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ဆောင်ပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အကြောင်းအရာနှင့် ကြော်ငြာခြင်းများကို ပေးရန်နှင့် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤအချက်အလက်ကို အခြား အချက်အလက်များ (ကွန်ပျူတာများ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ စမတ်တီဗီများနှင့် အခြား ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ထားသည့် စက်ကိရိယာများ ကဲ့သို့သော မတူညီသည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စက်ကိရိယာများ၏ အချက်အလက်များ အပါအဝင်) နှင့် ပေါင်းပါမည်။ ဥပမာ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ Mi အကောင့်အသေးစိတ်ကို သင်အသုံးပြုနေသည့် Mi အကောင့်တစ်ခု လိုအပ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုတိုင်းတွင် အသုံးပြုပါမည်။ ထို့အပြင်၊ သင့်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် အတွေ့အကြုံရစေရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ် သင်၏ သဘောတူညီမှုဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် သင့်ထံမှ ကိရိယာများ သို့မဟုတ် သင်နှင့်ဆက်စပ်သည့် ကိရိယာများမှ အချက်အလက်များကို ရွေးထုတ်ပါမည်၊ ခေါင်းစဉ်တစ်ခု တပ်နိုင်ရန်၊ အကြံဉာဏ်များပေးရန်၊ အကြောင်းအရာကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ပေးရန်နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် အင်္ဂါရပ်များပေးရန် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ ဘရောက်စာမှ သင်၏ ရှာဖွေမှု မှတ်တမ်းကို အသုံးပြုပြီး၊ Mi.com မှ သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်လောက်သည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အကြံပြုရန်။ အထက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရင်း ပေါင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၏လိုအပ်ချက်များအရ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကို အဆိုပါ ပေါင်းစပ်မှုအတွက် သီးသန့် ထိန်းချုပ်သည့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးပါမည်။ သင့်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာဖွေမှုနှင့် အလိုအလျောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ လက်ခံရရှိနေခြင်းကို ရှောင်ဖယ်ခွင့် ရှိပါသည်။ ဤလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို လေ့ကျင့်ရန်အတွက် သင့်အနေဖြင့် privacy@xiaomi.com သို့ အီးမေးလ်ပေးပို့နိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း တစ်ခုစီအတွက် သီးခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီတွင် ဖော်ပြထားသည့် ထိန်းချုပ် လုပ်ဆောင်နိုင် မှုများကို ကိုးကားနိုင်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ “သင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ” ကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ။
၂ ကွတ်ကီးများနှင့် အလားတူနည်းပညာများ
ကွတ်ကီး၊ တဂ်နှင့် စခရစ် ကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို Xiaomi နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် စီးပွားရေး ပါတနာများက အသုံးပြုပါသည် (အချက်အလက်များ ပိုမို သိရှိလိုလျှင် “သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ မျှဝေ၊ မည်သို့ လွှဲပြောင်းပြီး၊ လူအများကို မည်သို့ ထုတ်ဖော်ပြသသည်”ကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ)။ ဤနည်းပညာများအား ဦးစားပေးချက်များ စိစစ်ခြင်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား အုပ်ချုပ်ခြင်း၊ သုံးစွဲသူ၏ သုံးစွဲမှုအား ခြေရာခံခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ဤနည်းပညာကို အခြခံ၍ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်း စိစစ်လေ့လာသော အစီရင်ခံစာများ လက်ခံရရှိပါမည်။ ဤနည်းပညာများသည် သုံးစွဲသူများ၏ အမူအကျင့်များကို ပိုမိုနားလည်လာအောင် ကျွန်ုပ်တို့အား အကူအညီပေးပါသည်၊ လူအများ လာရောက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်အစိတ်အပိုင်းများကို ပြောပြပါသည်၊ ထို့အတူ ကြော်ငြာများနှင့် ဝက်ဘ်တွင် ရှာဖွေမှုများ၏ ထိရောက်မှု တိုင်းတာရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ ဒေသန္တရ ဥပဒေများအရ Internet Protocol (IP) လိပ်စာများ သို့မဟုတ် အလားတူ သက်သေခံနံပါတ်များ မှလွဲ၍ ကွတ်ကီးနှင့် အခြားနည်းပညာများက စုဆောင်းရယူ ထားသည့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်မဆိုင်သည့် အချက်အလက်အဖြစ် မှတ်ယူပါသည်။
• မှတ်တမ်းဖိုင်များ- ဝက်ဘ်ဆိုက် အများစု ကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချက်အလက်များအား စုဆောင်းပြီး မှတ်တမ်းဖိုင်များတွင် သိမ်းဆည်းထားပါမည်။ ထိုအချက်အလက်များတွင် အင်တာနက် သဘောတူညီချက် (IP) လိပ်စာများ၊ ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစား၊ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူ (ISP)၊ မှီငြမ်း/အထွက် စာမျက်နှာ၊ လည်ပတ်မှု စစ်စတမ်၊ ရက်စွဲ/အချိန် တံဆိပ် နှင့်/သို့မဟုတ် ကလစ်ကြောင်း ဒေတာများ ပါဝင်ပါသည်။ အလိုအလျောက် စုဆောင်းသော ဤမှတ်တမ်းဒေတာများအား အခြား အချက်အလက်များနှင့် ချိတ်ဆက်မည် မဟုတ်ပါ။
• ကြော်ငြာခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ စီးပွားရေး ပါတနာများနှင့် (အချက်အလက်များ ပိုမို သိရှိလိုလျှင် “သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ မျှဝေ၊ မည်သို့ လွှဲပြောင်းပြီး၊ လူအများကို မည်သို့ ထုတ်ဖော်ပြသသည်”ကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြော်ငြာပြသခြင်း သို့မဟုတ် အခြားဆိုက်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာကို စီမံခြင်းများပြုလုပ်ရန်အတွက် အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ စီးပွားရေး ပါတနာများသည်၊ သင်၏ လျှောက်ကြည့်သည့် လှုပ်ရှားမှုများနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုများအပေါ် အခြေခံပြီး သင့်အား ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရန်အတွက် ဤဆိုက်နှင့် အခြားသော ဆိုက်များပေါ်ရှိ သင်၏ လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စုဆောင်းခြင်းတို့တွင် ကွတ်ကီးကဲ့သို့သော နည်းပညာများကို သုံးပါမည်။ ကြော်ငြာဝန်ဆောင်မှုအား မပံ့ပိုးမီ သင့်ထံ သဘောတူခွင့်ပြုချက် တောင်းခံပါမည်။ ထိုအချက်အလက်များအား ကြော်ငြာပေးပို့ရာတွင် အသုံးပြုခြင်းကို မလိုလားပါက ဤနေရာတွင် ထိနှိပ်ပါ- http://preferences-mgr.truste.com။
• မိုဘိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု- သင့် ဖုန်းထဲရှိ မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်အား သိရှိနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် အချို့ မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်းတွင် မိုဘိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ဆော့ဖ်ဝဲလ်အား အသုံးပြုပါမည်။ ဤဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် အောက်ပါ အချက်အလက်များအား မှတ်တမ်းတင်ထားလိမ့်မည်- သင် အက်ပလီကေးရှင်း သုံးစွဲမှု အကြိမ်ရေ၊ အက်ပလီကေးရှင်းအတွင်း ဖြစ်ပေါ်သော ဖြစ်ရပ်များ၊ စုစုပေါင်း သုံးစွဲမှု၊ စွမ်းဆောင်ရည် ဒေတာနှင့် ပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်သော နေရာစသည်တို့။ ကျွန်ုပ်တို့မှ မိုဘိုင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရှိ အချက်အလက်များ နှင့် မိုဘိုင်း အက်ပလီကေးရှင်းသို့ သင် တင်ပို့ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အား လင့်ခ်ချိတ်မည် မဟုတ်ပါ။
• အတွင်းပိုင်း သိုလှောင်ခန်း – HTML5/Flash- ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွင်းပိုင်း သိုလှောင်မှု အရာ (LSO) ၊ ဥပမာ- HTML5 သို့မဟုတ် Flash ဖြင့် အကြောင်းအရာနှင့် ဦးစားပေးချက်များအား သိုလှောင်ပါမည်။ သင်၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကြည့်ရှုမှုအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူး​ပေါင်း​ဆောက်ရွက်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ HTML5 သို့မဟုတ် ဖလက်ရှ်ကွတ်ကီးဖြင့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်း၊ သိမ်းဆည်းပါမည်။ ဘရောက်ဇာများမှ HTML5 LSO အား ဖယ်ရှားရန် ကိုယ်ပိုင် စီမံဖြေရှင်းရေး တူးလ်များ ရှိပါသည်။ Flash ကွတ်ကီးများအား စီမံခန့်ခွဲလိုပါက အောက်ပါလင့်ခ်အား နှိပ်ပါ- http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html။
၃ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ မျှဝေ၊ မည်သို့ လွှဲပြောင်းပြီး၊ လူအများကို မည်သို့ ထုတ်ဖော်ပြသလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို တတိယပါတီများသို့မရောင်းချပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တခါတရံ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို၊ သင်၏လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီး ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးခြင်းအပါအဝင်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးရန် သို့မဟုတ် တိုးတက်ကောင်း မွန်အောင်လုပ်ရန်အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ(အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း) နှင့် မျှဝေပါမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဤအချက်အလက် မျှဝေခြင်းကို သင်ဆက်လက်ခွင့်ပြုလိုခြင်းမရှိတော့လျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် privacy@xiaomi.com တွင် ဆက်သွယ်ပါ။
၃.၁.၁ သင် တက်ကြွစွာ ရွေးချယ်မှု သို့မဟုတ် တောင်းဆိုမှုကြောင့် မျှဝေခြင်း
သင်၏တိကျပြတ်သားသော သဘောတူညီမှု သို့မဟုတ် သင်၏ တောင်းဆိုမှုဖြင့်၊ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို သင်၏ဘောတူညီမှု/တောင်းဆိုမှု အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း သင်ရည်ညွန်းသည့် သတ်မှတ် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ မျှဝေပါမည်။ ဥပမာ၊ သင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ဝက်ဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် အက်ပ်ကို ဆိုင်းအင်ဝင်ရန် Mi အကောင့်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ။
၃.၁.၂ ကျွန်ုပ်တို့၏အုပ်စုနှင့် အချက်အလက် မျှဝေခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအားလုံးကို သင့်အား ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များကို အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အခြား Xiaomi နှင့်ပေါင်းစည်းထားသည့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အချိန်နှင့်အမျှ မျှဝေပါမည်။
၃.၁.၃ ကျွန်ုပ်တို့၏ Ecosystem ကုမ္ပဏီများနှင့် မျှဝေခြင်း
Xiaomi သည် ကုမ္ပဏီ တစ်စုနှင့် အတူ Mi Ecosystem အား ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ Mi Ecosystem ကုမ္ပဏီများသည် Xiaomi မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသော၊ ပြုစုပျိုးထောင်သော သီးခြားအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်၍ ၎င်းတို့ နယ်ပယ်များတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ (ဟာ့ဒ်ဝဲလ်နှင့် ဆော့ဖ်ဝဲလ် နှစ်မျိုးလုံး) တိုးတက်စေရန် နှင့် အကောင်းဆုံး ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် Xiaomi သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဒေတာများအား Mi Ecosystem ကုမ္ပဏီထံ ထုတ်ဖော်နိုင်ခြေရှိသည်။ အချို့ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများသည် Xiaomi တံဆိပ်ကို သုံးပြီး အချို့သည်လည်း ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ် ပံ့ပိုးရန်နှင့် သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် Mi Ecosystem ကုမ္ပဏီများသည် Xiaomi အုပ်စု၊ Xiaomi မှ ပိုင်ဆိုင်သော အခြား တံဆိပ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသာမက အခါအားလျော်စွာ အချက်အလက်များကိုလည်း မျှဝေပါသည်။ Xiaomi သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကုဒ်ဖွဲ့ခြင်းတွင် ကန့်သတ်မှုမရှိခြင်းအပါအဝင် လုံခြုံရေးကိစ္စများကို သေချာစေရန်အတွက် သင့်လျော်သော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်သည်။
၃.၁.၄ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် စီးပွားရေး ပါတနာများနှင့် မျှဝေခြင်း
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီတွင် ဖော်ပြထားသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီရန် အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၊ လိုအပ်ခဲ့လျှင်၊ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် စီးပွားရေး ပါတနာများနှင့် မျှဝေပါမည်။
ဤသို့ မျှဝေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းပို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ဒေတာ စင်တာများ၊ ဒေတာ သိမ်းဆည်းပေးသည့် စက်ရုံများ၊ သုံးစွဲသူအား ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ ကြော်ငြာနှင့်စျေးကွက်ရှာ ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် အခြားသော စီးပွားရေး ပါတနာများ ပါဝင်ပါသည်။ ဤပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများသည် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ၏ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုထက်မကအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းကို Xiaomi ၏ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ပါမည်၊ သင့်ကို ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် မျှဝေခြင်းသည် တရားဝင်၊ ဥပဒေအရ၊ လိုအပ်မှုအရ၊ သီးခြားဖြစ်စေ၍ တိကျစွာခိုင်မာသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ အတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံပါသည်။ Xiaomi သည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို ၎င်းတို့သည် သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာမှု သေချာစေရန် သဘောတူစာချုပ်များဖြင့် ဝီရိယထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများတွင် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွဲများရှိသည်မှာ ရံဖန်ရံခါမှသာ ဖြစ်ပါသည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း တိုင်းတာမှုပေးရန်၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်နှင့် အခြား စီးပွားရေး ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ(ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြော်ငြာသူများ စသဖြင့်) နှင့် လည်း အချက်အလက်များ(ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ မပါသည့် အချက်အလက်) ကို စုပေါင်းခြုံငုံပုံစံဖြင့် မျှဝေပါသည်။ အဆိုပါ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြော်ငြာသူများနှင့် အခြား စီးပွားရေး ပါတနာများက ၎င်းတို့၏ ကြော်ငြာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ ထိရောက်မှုရှိမရှိ၊ လွှမ်းခြုံမှုရှိမရှိတို့ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အကူအညီပေးရန် အတွက်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများသုံးနေသည့် သူ အမျိုးအစားများကို နားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ အက်ပ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို လူအများမည်သို့ အပြန်အလှန် ပြုမူသည် ဆိုသည်ကို နားလည်စေရန် အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဥပမာ − ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသည့် သို့မဟုတ် အရောင်းအဝယ်များတွင် ပါဝင်သည့် အုပ်စုတစ်ခုအတွင်းရှိ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူအရေအတွက် ကဲ့သို့သော ၎င်းတို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု အတွက် ယေဘုယျ သုံးစွဲမှု ဦးတည်ရာ လမ်းကြောင်းကိုလည်း မျှဝေပါသည်။
ဥပဒေအရ လိုအပ်ချက်များ၊ ဥပဒေအရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တရားစွဲဆိုခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ပြည့်သူကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုမှုများအရ၊ Xiaomi သည် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသရန် လိုကောင်းလိုပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ ထုတ်ဖော်ပြသမှုသည် နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေးအတွက်၊ ဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက်၊ သို့မဟုတ် ပြည်သူလူထုအတွက် အရေးကြီးသည့် အခြားသော ကိစ္စရပ်များအတွက် လိုအပ်လျှင် သို့မဟုတ် သင့်လျော်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အကြောင်း အချက်အလက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာစေရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေး၊ ရပိုင်ခွင့်များ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူများကို ကာကွယ်ရန်၊ သို့မဟုတ် အကယ်၍ အဆိုပါ ထုတ်ဖော်ပြသမှုသည် အောက်ဖော်ပြပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် လိုအပ်ခဲ့လျှင် (အယောင်ဆောင်လိမ်လည်မှုအား မှတ်မိသိရှိခြင်း၊ ကာကွယ်တားဆီးခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းခြင်း၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအား တရားမဝင် အသုံးပြုခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် ပေါ်လစီများအား ချိုးဖောက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အခြား ထိခိုက်စေသော သို့မဟုတ် တရားဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သော လှုပ်ရှားမှုများ) ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အကြောင်း အချက်အလက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသပါမည်။ (Xiaomi သည် သင်၏ သဘောတူညီချက်မရဘဲ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းကို၊ အကယ်၍ ၎င်းသည် သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းမှု ဥပဒေများအရ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခွင့်ပြုသော အချိန် ရံဖန်ရံခါ မှသာ ဆောင်ရွက်ပါသည်။) ဤတွင် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ပြည်သူလူထု သို့မဟုတ် အစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အစည်းများကို ပေးခြင်း၊ သင့်အကောင့်ကို အယောင်ဆောင်လိမ်လည်မှု၊ ချိုးဖောက်မှုများနှင့် အခြားထိခိုက်စေသော အပြုအမူများအတွက် ကာကွယ်တားဆီးရန် ယုံကြည် စိတ်ချရသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို အောက်ဖော်ပြပါတို့နှင့် မျှဝေ ပါမည်-
• ကျွန်ုပ်တို့၏ စာရင်းကိုင်များ၊ စာရင်းစစ်များ၊ ရှေ့နေများ သို့မဟုတ် တူညီသည့် အကြံပေးများကို ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များ ကျွန်ုပ်တို့အားပေးရန် တောင်းဆိုသည့်အခါ၊ နှင့်
• အမှန်တကယ် သို့မဟုတ် ရောင်းချရန်အလားအလာ ရှိသည့်၊ သို့မဟုတ် Xiaomi Group ၏ဖြစ်တည်မှုနှင့် ပတ်သက်နေသည့် အခြားသော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပါဝင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် အခြား ဆက်စပ်နေသည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ နှင့်
• အကယ်၍ သင်က သီးခြား ဖော်ထုတ်ပြသရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အခြားမည်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကို မဆို။
Xiaomi သည် သင်၏ အချက်အလက်ကို အောက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များမှ လွဲ၍ မည်သည့် အကြောင်းအရာကိုမျှ လွှဲပြောင်းပေးမည်မဟုတ်ပါ-
• သင်၏တိကျပြတ်သားသော သဘောတူညီမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ ရရှိသော အခါ၊
• အကယ်၍ Xiaomi သည် ကုမ္ပဏီချင်း ပေါင်းခြင်း၊၎င်း၏ပိုင်ဆိုင်မှုများ အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရယူခြင်း သို့မဟုတ် ရောင်းချခြင်းတို့တွင် ပါဝင်သည့်အခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုင်ရှင် ပြောင်းလဲမှု၊ သုံးစွဲမှုနှင့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက် အပေါ် သင်၏မည်သို့ရွေးချယ်နိုင်ရန် အီးမေးလ်ဖြင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ထင်ထင်ရှားရှား ကြော်ငြာ ကာ အကြောင်းကြားပါမည်။
၃.၃ အများပြည်သူကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း
သက်သေခံသတ်မှတ်မှုမှ ပြန်လည်ပယ်ဖျက်သည့် ဖောင်တွင် အောင်နိုင်သူကို ဖော်ပြသည့်အခါ အောင်နိုင်သူ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် Mi အကောင့် ID သို့မဟုတ် သုံးစွဲသူအမည် ထုတ်ပြန်ခြင်းအပြင်၊ Xiaomi သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများတွင်သာ အများပြည်သူကို ထုတ်ဖော်ပြသပါမည် -
• ဥပဒေအရ သို့မဟုတ် ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်များအရ အများပြည်သူကို ထုတ်ဖော်ပြသ ပါသည်၊ ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းများ၊ ဥပဒေအရ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ တရားစွဲဆိုခြင်း သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာရှိသော အစိုးရ ဌာနများမှ တောင်းဆိုမှုများ အပါအဝင်။
၄ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လို သိမ်းဆည်းပြီး ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းပေးသလဲ
၄.၁ Xiaomi ၏ လုံခြုံရေး အကာအကွယ်များ
သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များသည် လုံခြုံစွာထားရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော ဝင်ရောက်မှု၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါက်ကြားမှုနှင့် အလားတူ လုံခြုံရေး အန္တရာယ်များမှ ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် တရားဝင်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အီလက်ထရွန်နစ် စနစ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်များဖြင့် မိုဘိုင်းစက်နှင့် Xiaomi ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းသော အချက်အလက်အား ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်အညီ ကာကွယ်ပေးမည်မှာ သေချာပါသည်။ ဥပမာ- Mi အကောင့်သို့ ဝင်ရောက်သောအခါ အကောင့် ပိုမိုလုံခြုံစေရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ပံ့ပိုးသော အစီအစဉ်ဖြစ်သည့် လုံခြုံရေးနှစ်ထပ် နည်းစနစ်အား ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Xiaomi စက်မှ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဒေတာ ပေးပို့/လက်ခံသောအခါ Secure Sockets Layer (SSL) လုံခြုံရေးနှင့် အခြား နည်းလမ်းများအသုံးပြု၍ ကုဒ်ဖွဲ့ ကာကွယ်ပေးပါမည်။
သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် အားလုံးကို လုံခြုံစိတ်ချရသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆာဗာတွင် ကာကွယ်မှုများဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ သင့်ဒေတာ၏ အရေးပါမှုအလိုက် အမျိုးအစားခွဲခြား၍ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို လုံခြုံရေးအဆင့်အရ သေချာစွာ သိမ်းဆည်းထားပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော ဝင်ရောက်သုံးစွဲခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရန် ကလောက်အခြေခံသော ဒေတာသိမ်းဆည်းမှုများနှင့် ရယူသုံးစွဲမှုများကို ထိန်းချုပ်ကာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချက်အလက် စုဆောင်းပုံ၊ သိမ်းဆည်းပုံနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး နည်းလမ်း များအား ပုံမှန် ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စီးပွားရေး ပါတနာများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများကို ၎င်းတို့သည် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု သေချာစေရန် အတွက်လည်း ဝီရိယထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင့်လျော်သည့် သဘောတူစာချုပ် ကန့်သတ်ချက်များ ထားရှိခြင်းအားဖြင့် သင့်လျော်သည့် လုံခြုံရေး စံနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းထားမှုအားလည်း စစ်ဆေးသည်၊ လိုအပ်ပါက၊ စာရင်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းတို့ကိုပါ ဆောင်ရွက်သည်။ ထို့အပြင်၊ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် စီးပွားရေးပါတနာများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် သဘောတူညီမှုဆိုင်ရာ၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို လိုက်နာရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးကြောင်း သိရှိနားလည်သဘောပေါက်မှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း သင်တန်းများနှင့် စာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား တတ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းဖြင့် တရားဝင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါမည်။ သို့သော် အင်တာနက် သုံးစွဲမှုသည် အပြည့်အဝ စိတ်ချ၍ မရနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် အင်တာနက်မှ တဆင့် သင် လွှဲပြောင်းသောအခါ သို့မဟုတ် သင့်ထံ လွှဲပြောင်းသောအခါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအတွက် လုံးဝ လုံခြုံသည်ဟု အာမခံချက် မပေးနိုင်ပါ။
သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာ ကာကွယ်ရေး ကြီးကြပ်မှု အာဏာပိုင်နှင့် ဒေတာအကြောင်းအရာများကို လိုအပ်ခဲ့လျှင် ဒေတာချိုးဖောက်မှုကို အကြောင်းကြားပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ ဒေတာ ကာကွယ်မှုဥပဒေအရ လိုအပ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ချိုးဖောက်မှုကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
၄.၂ သင် ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲ
Xiaomi ရှိ သင်၏အကောင့် လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ် ပေါက်ကြားမှုဖြစ်ခဲ့လျှင် သင့်အနေဖြင့် သင်၏ လော့ဂ်အင် လျှို့ဝှက်နံပါတ် သို့မဟုတ် အကောင့် အချက်အလက်ကို မည်သူ့ကိုမျှ မပြဘဲ Xiaomi အတွက် မည်သည့် လျှို့ဝှက်ကုဒ်နှင့်မျှမတူသော တခုတည်းသော လျှို့ဝှက်နံပါတ်ကို သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်း၊ ကျေးဇူးပြု၍ မည်သူ့ကိုမျှ သင် ရရှိသည့် မှန်ကန်ကြောင်းစိစစ်အတည်ပြုသည့်ကုဒ်ကို မပြပါနှင့် (Xiaomi သုံးစွဲသူ ဝန်ဆောင်မှုက တောင်းဆိုခြင်း အပါအဝင်) အထူးသဖြင့် အခြားသူ၏ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် အများသုံး အင်တာနက်မှ တဆင့် Mi အကောင့်သို့ ဆိုင်းအင်ဝင်ပြီးနောက် အမြဲပြန်ထွက်ရန် သတိပြုသင့်ပါသည်။
သင်၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ တဆင့် သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ထုတ်ဖော်ခြင်းခံရပါက Xiaomi မှ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် သင့်အကောင့်သို့ ခွင့်ပြုချက်မရှိသော ဝင်ရောက်မှုများ သို့မဟုတ် အခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုံခြုံရေး ပေါက်ကြားမှုများ ရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့အား ချက်ချင်း အကြောင်းကြားပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ သင်၏ အကူအညီသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အား ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရာတွင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါသည်။
၄.၃ စက်ထဲရှိ အခြား အင်္ဂါရပ်များအား ဝင်ရောက်သုံးစွဲခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ အက်ပလီကေးရှင်းမှ သင့်စက်ထဲရှိ အချို့အင်္ဂါရပ်များသို့ ဝင်ရောက်ရန် လိုအပ်ပါသည်၊ ဥပမာ- အဆက်အသွယ်များ၏ အီးမေးလ် ဖွင့်ခြင်း၊ SMS သိုလှောင်ခန်း၊ Wi-Fi ကွန်ရက် အခြေအနေစသည်ဖြင့်။ ဤအချက်အလက်သည် အက်ပလီကေးရှင်းအား သင့်စက်ထဲတွင် အလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုပြီး အက်ပလီကေးရှင်နှင့် သင့်အကြား အပြန်အလှန် ရှိစေသည်။ စက်ကိရိယာတွင် ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် privacy@xiaomi.com တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်၊ အချိန်မရွေး သင်၏ ခွင့်ပြုချက်များကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။
၄.၄ သိမ်းဆည်းမှု ပေါ်လစီ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီတွင်၊ သို့မဟုတ် သတ်မှတ် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ သီးခြား ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အတွက်၊ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရလိုအပ်လျှင် လိုအပ်သည့်ကာလအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အား ထိန်းသိမ်းပါသည်။ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည့်ကာလ အသေးစိတ်ကို သတ်မှတ် ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ စုဆောင်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက် ပြည့်စုံလျှင်၊ သို့မဟုတ် ပယ်ဖျက်ပေးရန် သင်၏တောင်းဆိုမှုကို အတည်ပြုပြီးလျှင်၊ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို ရပ်ဆိုင်းပြီးလျှင် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ထိန်းသိမ်းခြင်းမှ ရပ် ပြီး ဖျက်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အမည်မသိ လုပ်ပါမည်။ ၎င်း၏ချွင်းချက်မှာ အများအကျိုးဆိုင်ရာ၊ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသန သို့မဟုတ် ကိန်းဂဏန်း စာရင်းအင်း ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ဆောင်ရွက်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း ဒေတာလုပ်ဆောင်မှုများသည် မူလ စုဆောင်းသည့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မပတ်သက်တော့စေကာမူ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ သို့မဟုတ် သင်၏တောင်းဆိုမှုအရ ခွင့်ပြုလျှင်၊ Xiaomi သည် ဤအချက်အလက် အမျိုးအစားကို ထိန်းသိမ်းထားရမည့်ကာလ စံနှုန်းထက် ပို၍ကြာရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားမည်၊
သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အား ထိန်းချုပ်ခြင်း
၅.၁ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု ဆက်တင်
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အပေါ် စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ကွာခြားကြောင်း Xiaomi မှ သိရှိနားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Xiaomi မှ သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များအား စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထုတ်ဖော်ခြင်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ဆက်တင် ထိန်းချုပ်မှု ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်အား ဥပမာနှင့်တကွ ဖော်ပြထားပါသည်။
• အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ ပရိုဂရမ်နှင့် တည်နေရာ ဝင်ရောက်မှု အင်္ဂါရပ်အား ဖွင့်/ပိတ်ခြင်း၊
• Mi အကောင့် လော့ဂ်အင်ဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် လော့ဂ်အောက်ထွက်ခြင်း၊
• Xiaomi ကလောက် ဆင့်ခ် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ်၊ နှင့်
• i.mi.com မှ တဆင့် Xiaomi ကလောက်ပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် မည်သည့်အချက်အလက်ကို မဆို ဖျက်ခြင်း။
• ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား ဝန်ဆောင်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ ဖွင့်/ပိတ် ခလုတ်။ MIUI လုံခြုံရေးအက်ပ်တွင် သင်၏ စက်လုံခြုံရေး အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ရယူနိုင်ပါသည်။
သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အား အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများတွင် အသုံးပြုရန် ယခင်က သဘောတူပြီးဖြစ်သော်လည်း သင် သဘောမတူလိုသောအခါ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို privacy@xiaomi.com သို့ အီးမေးလ်ပို့၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
၅.၂ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်အပေါ် သင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များ
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းကမ်းစည်းမျဉ်း များပေါ်မူတည်၍ သင့်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ ရယူထားသည့် သင်၏မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကိုမဆို သင့်တွင် ဝင်ရောက် အသုံးပြုခွင့်၊ ပြင်ဆင်ခွင့်နှင့် ဖျက်ခွင့် ရှိသည်။ (ဤနေရာမှစ၍ တောင်းဆိုမှုဟု ရည်ညွှန်းမည်)
သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်သမျှ အသေးစိတ်ကို http://account.mi.com၌ သင်၏ Mi အကောင့်တွင် သို့မဟုတ် သင့်စက်ကိရိယာပေါ်ရှိ သင့်အကောင့်တွင့် လော့ဂ်အင် ဝင်ရောက် မွမ်းမံနိုင်ပါသည်။ ထပ်မံသိရှိလိုသော အချက်အလက်များရှိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ အီးမေးလိပ်စာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ရေးသားပေးပို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အီးမေးလ်-privacy@xiaomi.com
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီအရ သင်၏ တောင်းဆိုမှုမှာ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်များ ပြေလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်-
(၁) Xiaomi ၏ အထူးဝင်ရောက်ခွင့် တောင်းဆိုမှုမှတဆင့်၊ သင်၏အချက်အလက်လုံခြုံရေးကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်၊ သင်၏ တောင်းဆိုမှုကို စာဖြင့် ရေးသားသင့်ပါသည်။ (ဒေသန္တရ ဥပဒေက နှုတ်ဖြင့် တောင်းဆိုမှုကို တိကျစွာ အသိအမှတ်မပြုထားလျှင်)
(၂) Xiaomi ကို သင်၏သက်သေခံ စိစစ်ရန်နှင့် လျှောက်ထားသူသည် တောင်းဆိုသည့် အချက်အလက်ကို ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် လုံလောက်သည့် အချက်အလက်များ ပေးရပါမည်။
အတည်ပြုရန် လုံလောက်သည့် အချက်အလက်ကို အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် သင်၏တောင်းဆိုမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏တောင်းဆိုမှုကို သင်၏သက်ဆိုင်ရာဒေတာ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေအရ သတ်မှတ်အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း ပြန်ကြားဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်နှင့် သင်၏ရပိုင်ခွင့်များအား မည်သို့ အသုံးပြုနေသည် ဆိုသည်ကို ရှင်းလင်း၊ မြင်သာ၊ သဘောပေါက်လွယ်သော အချက်အလက်များဖြင့် သင့်ကို ပေးရန် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် သင့်တွင်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ အချက်အလက်ကို ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီတွင် သင့်ကို ဖော်ပြပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၏လိုအပ်ချက်များအရ ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပြီး လုပ်ဆောင် ထားသည့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် မိတ္တူတစ်စုံကို သင်၏တောင်းဆိုခဲ့လျှင် အခမဲ့ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အတွက် အခြားမည်သည့် တောင်းဆိုမှုအတွက်ကိုမဆို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ အမှန်တကယ် စီမံခန့်ခွဲမှု စရိတ်ပေါ်အခြေခံ၍ ကျသင့်သော အခကြေးငွေ ကောက်ခံပါမည်။
• အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ရယူထားသည့် သင်၏ အချက်အလက် တစ်ခုခုမှာ မမှန်ကန်လျှင် သို့မဟုတ် မပြည့်စုံလျှင် အဆိုပါ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို သုံးမည့်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီး မှန်ကန်အောင် သို့မဟုတ် ပြည့်စုံအောင် လုပ်ခွင့်ရှိသည်။
• သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများ၏လိုအပ်ချက်များအရ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ဖယ်ရှားရန် တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၎င်းကို ထားရှိပြီး သုံးစွဲရန် မည်သည့် အကြောင်းပြချက်မှ မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အစီအမံများအပါအဝင် လုပ်သင့်သောလုပ်ထုံးအဆင့်များ ဆောင်ရွက်ကာ၊ အကြောင်း ပြချက်ခိုင်လုံမှု ရှိ မရှိ စဉ်းစားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထောက်ခံခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် လုံခြုံရေး နည်းပညာများအရ အရံသိမ်းဆည်းစနစ်မှ အဆိုပါ အချက်အလက်ကို ချက်ချင်း ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ ထိုသို့ဖြစ်လာလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် သင်၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ အရံသိမ်းဆည်းစနစ်တွင် မဖျက်မချင်း သို့မဟုတ် အမည်မဲ့ မလုပ်မချင်း အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် သီးခြား လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
• တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ရှာခြင်း (ပရိုဖိုင်တွဲခြင်းအသုံးပြုမှု အပါအဝင်)၊ နှင့် ဥပဒေကြောင်းအရ လုပ်ဆောင်ရခြင်းသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင် စိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်သည့် အခြေအနေတစ်ခုခု အနေအထားအောက် အပါအဝင် လုပ်ဆောင်မှု အမျိုးအစားတချို့ကို ငြင်းပယ်ခွင့် သင့်တွင်ရှိပါသည်။
အထူးသဖြင့် အချို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ဥပဒေများအောက်တွင်-
• သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် အသုံးပြု လုပ်ဆောင်ခြင်းအား ကန့်သတ်မှု ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သင်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကန့်သတ်ရန် တောင်းဆိုမှုကို အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံမှု ရှိ မရှိ စဉ်းစားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံမှုများသည် GDPR နှင့် သက်ဆိုင်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို GDPR ရှိ သက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများအောက်တွင်သာ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ဆောင်မှုကန့်သတ်ချက် မရုပ်သိမ်းမီ သင့်ကို အကြောင်းကြားပါမည်။
• သင့်တွင် ဥပဒေအရ သင်နှင့်သက်ဆိုင်လာနိုင်သည့်၊ သို့မဟုတ် သင့်ကို အလားတူ အန္တရာယ် ကျရောက်စေမည့် အရာများ ဖြစ်စေသည့် ပရိုဖိုင်တွဲခြင်း အပါအဝင် အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်း တစ်ခုတည်းကိုသာ အခြေခံသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မလိုက်နာ ခွင့်ရှိပါသည်၊
• သင့်တွင် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို စနစ်တကျ၊ အများသုံးပုံစံဖြင့် အခြားသော ဒေတာထိန်းချုပ်စနစ်သို့ အချက်အလက်ပေးပို့မှုအတွက် အတည်ပြုခွင့် ရှိပါသည်။
အဓိပ္ပါယ်မပြည့်စုံသော/ရှုပ်ထွေးသော တောင်းဆိုမှုများ၊ အခြားသူများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ရပိုင်ခွင့်ကို ပျက်စီးစေသည့် တောင်းဆိုမှုများ၊ အလွန် လက်တွေ့ မကျသည့် တောင်းဆိုမှုများ၊ အချိုးအစား မညီမျှသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် တောင်းဆိုမှုများနှင့်၊ ဒေသန္တရဥပဒေအရ မလိုအပ်သော တောင်းဆိုမှုများ၊ အများပြည်သူအတွက် အချက်အလက်များ၊ လျှို့ဝှက်အခြေအနေများရှိ အချက်အလက်များကို မလုပ်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိသည်။ အကယ်၍ အဆိုပါ အချက်အလက်ကို ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်အသုံးပြုရန် တောင်းဆိုမှုသည် ရှု့ထောင့်တချို့မှကြည့်လျှင် အယောင်ဆောင် လိမ်လည်မှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လုံခြုံရေး ရည်ရွက်ချက်များ အတွက် အဆိုပါအချက်အလက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တရားဝင်သုံးစွဲနိုင်မှုမရှိ ဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့က ယုံကြည်လျှင်လည်း ၎င်းတောင်းဆိုမှုကို ပယ်ချနိုင်ပါသည်။
၅.၃ သဘောတူညီမှု ရုပ်သိမ်းခြင်း
သင် ယခင်က စုဆောင်းရယူခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အပိုင် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု ရှိသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ခြင်း အပါအဝင် တောင်းဆိုချက်တစ်ခုတင်သွင်းပြီး၊ အထူးသဖြင့် ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်ပေးထားသည့် သဘောတူခွင့်ပြုချက်ကို ရုပ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ သင်သုံးနေသည့် သီးခြားဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်ပြီး သင့်အနေဖြင့် Mi အကောင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စင်တာကို https://account.xiaomi.com/pass/del သွားနိုင်ပါသည် သို့မဟုတ် privacy@xiaomi.com သို့ အီးမေးလ် ပို့နိုင်ပါသည်။ သင့်တောင်းဆိုမှုကို သင်တောင်းဆိုလိုက်သည့်အချိန်မှ အဆင်ပြေဆီလျော်သည့်အချိန်တခုအတွင်းတွင် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်၊ ထို့အချိန်မှစ၍ သင်၏ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို စုဆောင်းရယူခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း မလုပ်တော့ပါ။
သင့်သဘောတူညီချက်ရုပ်သိမ်းသည့်အတိုင်းအတာ ပေါ်မူတည်ပြီး၊ ကျေးဇူးပြု၍ သင်မှတ်သားထားရမည်မှာ သင့်အနေဖြင့် Xiaomi ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဆက်လက်ရရှိနိုင်တော့မည် မဟုတ်တော့ပါ။ သင်၏ သဘောတူညီချက် သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှုသည် အဆိုပါ ရုပ်သိမ်းမှုပြီးသည့်နေရာ မရောက်မချင်း အခြေခံသဘောတူညီချက်အပေါ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်တရားဝင်မှုကို ထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၅.၄ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အကောင့် တစ်ခုအား ဖျက်သိမ်းခြင်း
အကယ်၍ သင် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုကို ဖျက်သိမ်းချင်လျှင် privacy@xiaomi.com သို့ လော့ဂ်အောက် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် အီးမေးလ် ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင် Mi အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ သင်မှတ်သားထားရမည်မှာ အဆိုပါ ဖျက်သိမ်းမှုသည် သင့်အား Xiaomi ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံး အသုံးပြုခြင်းမှ တားဆီလိမ့်မည်။ အဆိုပါ အခြေအနေများတွင် ရုပ်သိမ်းခြင်းကို တားမြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ခြင်း ပြုလုပ်ထားနိုင်သည်။ ဥပမာ အကယ်၍ Mi သီချင်းအတွက် အဖွဲ့ဝင်ကြေး မပေးရသေးခြင်း၊ သင်းမ်စတိုးရှိ သင်းမ်အတွက် ငွေပေးချေထားခြင်း၊ သို့မဟုတ် သင်၏ Mi ဘဏ္ဍာရေးတွင် အကြွေးမပေးရသေးခြင်း ကဲ့သို့သော သင့်အကောင့်ပေါ်မှ ငွေပေးချေမှုများ ရှိနေသေးလျှင်၊ သင်၏တောင်းဆိုမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ချက်ချင်း လုပ်ဆောင် ပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင် Xiaomi သို့ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အကောင့်ဖြင့် လော့ဂ်အင် ဝင်ရောက်သည့်အခါ အဆိုပါ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
၆ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကမ္ဘာအနှံ့သို့ မည်သို့ လွှဲပြောင်းသလဲ
Xiaomi သည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု အခြေခံအဆောက်အဉီမှ တဆင့် အရံသိမ်းဆည်းမှု လုပ်ဆောင်ပါသည်။ လက်ရှိ Xiaomi တွင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ အမေရိကန်၊ ဂျာမနီ၊ ရုရှားနှင့် စင်္ကာပူ တို့၌ ဒေတာစင်တာများ ရှိပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီတွင် ဖော်ပြထားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း၊ သင်၏ အချက်အလက်များကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့်အညီ ဒေတာစင်တာများသို့ လွှဲပြောင်း ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများနှင့် စီးပွားရေး ပါတနာများထံလည်း လွှဲပြောင်း ပေးပို့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် သင်၏အချက်အလက်များသည် အခြားသော နိုင်ငံများ သို့မဟုတ် ဒေသများသို့ ပို့ခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံတကာ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတည်ရှိရာ ဒေသရှိ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်သည် သင်၏ဒေသရှိ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၌ ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် အပေါ်ထားရှိသည့် တူညီသည့် စံနှုန်းများအတိုင်း ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည် သို့မဟုတ် အကာအကွယ်ပေးချင်မှ ပေးလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို နိုင်ငံရပ်ခြား စက်ရုံအလုပ်ရုံများသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ပြီး သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်သည့်အတွက်၊ မတူညီသည့် အချက်အလက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေများအောက်တွင် မတူညီသည့် အန္တရာယ်အခက်အခဲများ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ၊ ထိုအချက်က ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို လိုက်နာရန်နှင့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရန်ဆိုသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကတိကဝတ်ကို ပြောင်းလဲစေမည်မဟုတ်ပါ။
• တရုတ်ပြည်မကြီးအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းရယူပြီး၊ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုများမှ ထွက်လာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေက ခွင့်ပြုထားသည့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လွှဲပြောင်း ပေးပို့ခြင်းမှလွဲ၍၊ တရုတ်ပြည်မကြီးရှိ ဒေတာ စင်တာများတွင် သိမ်းဆည်းပါသည်၊
• ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းရယူပြီး၊ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုများမှ ထွက်လာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို၊ ရုရှား ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် လွှဲပြောင်း ပေးပို့ခြင်းမှလွဲ၍၊ ရုရှားနိုင်ငံရှိ ဒေတာ စင်တာများတွင် သိမ်းဆည်းပါသည်၊
• အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းရယူပြီး၊ လည်ပတ်လုပ်ဆောင်မှုများမှ ထွက်လာသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ဒေတာစင်တာများတွင် သိမ်းဆည်းပါသည်၊
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေ ပြင်ပရှိ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ရန် လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်စပ်နေသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ပါမည်။ အဆိုပါ လွှဲပြောင်း ပေးပို့မှုအားလုံးကို တူညီသော အကာအကွယ် ပုံစံများ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသန္တရ အချက်အလက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သေချာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၌ရှိသော အကာအကွယ်များအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား privacy@xiaomi.com တွင် ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ ဥရောပ စီးပွားရေး ဧရိယာ European Economic Area (EEA) ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုလျှင်၊ Xiaomi Technologh Netharlands B.V က အချက်အလက် ထိန်းချုပ်စီမံခန့်ခွဲသူ အဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ Xiaomi Singapore Pte Ltd က အချက်အလက်များ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တာဝန်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ်ကို "ဆက်သွယ်ရန်" ဆက်ရှင်တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ Xiami က EEA တွင် သင့်ထံမှ စတင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို EEA ပြင်ပရှိ Xiaomi Group အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူထံ မျှဝေမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် EU စံနှုန်းဆိုင်ရာ စာချုပ် သဘောတူညီချက်များပါအတိုင်း သို့မဟုတ် GDPR တွင် ပေးထားသည့် အခြား အကာအကွယ်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၇ အရွယ်မရောက်သေးသူများအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကလေးငယ်များ အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူတွင် တာဝန် ရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကလေးတစ်ဉီးထံ တိုက်ရိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကလေးသူငယ်များ၏ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်းကို မပြုလုပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည် မိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ တစ်ဉီးဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ ကလေးသူငယ်က သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို Xiaomi သို့ ပေးလိုက်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက၊ အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ချက်ချင်း ဖယ်ရှားပစ်ကြောင်း သေချာစေရန်နှင့် အဆိုပါ ကလေးသူငယ်သည် သက်ဆိုင်ရာ မည်သည့် Xiaomi ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုမဆို စာရင်းသွင်းခြင်းမှ ပယ်ဖျက်ကြောင်း သေချာစေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် privacy@xiaomi.com သို့ ဆက်သွယ်ပါ။
၈ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ မည်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကို မဆို လိုက်နာရမည်လား?
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီသည် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ သင်အသုံးပြုသည့် Xiaomi ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍ − အသံ ပံ့ပိုးမှု၊ ကင်မရာ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ဗီဒီယို ဖွင့်ခြင်း၊ စနစ် ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် လုံခြုံရေး ဆက်စပ် ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဂိမ်း၊ ကိန်းဂဏန်းများ၊ လူမှုမီဒီယာ ဆက်သွယ်မှုများ၊ ငွေပေးချေမှု လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ မြေပုံ လမ်းညွှန်၊ မျှဝေခြင်း၊ push ၊ အချက်အလက် စစ်ထုတ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းသည့် နည်းလမ်း အစရှိသဖြင့်တို့ အပါအဝင် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပူးပေါင်းမှုမျိုး ရှိလိမ့်မည်။ အချို့ပုံစံများမှာ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းသို့ လင့်ခ်ချိတ်ပေးလိမ့်မည် − ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့် အချို့ကို SDKs ၊ APIs စသည့် ပုံစံများဖြင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုရပါမည်။ ဤထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ သင်၏အချက်အလက်များကိုလည်း စုဆောင်းရယူလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အထူး အကြံပြုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို သင်ဖတ်သလို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို အချိန်ပေးဖတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ထံမှ ၎င်းတို့ စုဆောင်းရယူထားသည့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများက မည်သို့ အသုံးပြုမည် ဆိုသည့်အချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိသည့်အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများမှ ချိတ်ဆက်ထားသည့် အခြားသော ဆိုက်များနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ မသက်ဆိုင်ပါ။
အထက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သီးခြား ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ အကျုံးဝင်လာမည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ စည်းကမ်းစည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီများ၏ ဥပမာများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
• သင်၏ အမှာစာအတွက် အပြီးသတ်ရန်နှင့် ငွေပေးချေရန် အတွက် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း စစ်ဆေးငွေချေထွက်ခွာ ဝန်ဆောင်မှု သုံးသည့်အခါ၊ အဆိုပါ စစ်ဆေးငွေချေထွက်ခွာမှု လုပ်နေစဉ် သင်ပေးသည့် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီအရ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
• MIUI လုံခြုံရေးအက်ပ်ရှိ လုံခြုံရေးစကင်ကို သင်အသုံးပြုသည့်အခါ၊ သင်ရွေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍၊ အောက်ဖော်ပြပါထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုမည်-
• Avast ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် သတင်းအချက်အလက် လုံခြုံရေးပေါ်လစီ- https://www.avast.com/privacy-policy
• မိုဘိုင်းအတွက် AVL SDK လိုင်စင်သဘောတူညီချက်- http://co.avlsec.com/License.en.html?l=en
• Tencent ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ- https://privacy.qq.com
• MIUI လုံခြုံရေးအက်ပ်တွင် ရှင်းလင်းရေးကိရိယာ အင်္ဂါရပ်ကို သင် အသုံးပြုသည့်အခါ၊ သင်ရွေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍၊ အောက်ဖော်ပြပါထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုမည်-
• Cheetah Mobile ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ- https://www.cmcm.com/policies/privacy-policy
• MIUI လုံခြုံရေးအက်ပ်တွင် ရှင်းလင်းရေးကိရိယာ အင်္ဂါရပ်ကို သင် အသုံးပြုသည့်အခါ၊ သင် ရွေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍၊ အောက်ဖော်ပြပါထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုမည်-
• Google ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ- https://policies.google.com/privacy
• Facebook ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ- https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy
• Google ရေးသွင်းနည်းစနစ်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ Google ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီဆိုင်ရာ- https://policies.google.com/privacy
၉ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ မွမ်းမံသလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို အချိန်ကာလအလိုက်၊ စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာ ပြောင်းလဲမှုပေါ်မူတည်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၊ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို မွမ်းမံပါမည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီပါ အကြောင်းအရာများကို ပြောင်းတော့မည်ဆိုလျှင်၊ သင့်ထံ အီးမေးလ်ကဲ့သို့သော သင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်မှတဆင့် သင့်ကို အကြောင်းကြားပါမည် (သင်၏ အကောင့်တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အီးမေးလ်လိပ်စာ သို့ ပို့ပါသည်)၊ သို့မဟုတ် Xiaomi ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ဖော်ပြမည်၊ သို့မဟုတ် သင့်ကို မိုဘိုင်းစက်များမှတဆင့် အကြောင်းကြားပါမည်၊ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းရယူထားသည့် အချက်အလက်ကို မည်သို့ အသုံးပြုသည်ဆိုသည့်အကြောင်းကို သင်လေ့လာနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို ထိုသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် ကြော်ငြာ သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် သက်ရောက်မည့် ရက်စွဲမှစတင်၍ အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ အပေါ် နောက်ဆုံး ပြောင်းလဲထားသည့် အချက်အလက်ကို သိရှိနိုင်စေရန် ဤစာမျက်နှာကို ပုံမှန် စစ်ဆေးရန် သင့်အား တိုက်တွန်းပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ မိုဘိုင်း နှင့်/သို့မဟုတ် မည်သည့် စက်ကိရိယာတွင်မဆိုရှိသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်ဆက်လက် အသုံးပြုနေလျှင်၊ မွမ်းမံထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို သင်အသိအမှတ်ပြုသည်ဟု ယူဆပါမည်။ သင့်ထံမှ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ထပ်မံစုဆောင်းရယူသည့် အခါ၊ သို့မဟုတ် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို ရည်ရွယ်ချက်အသစ်အတွက် အသုံးပြုသည့်အခါ သို့မဟုတ် ထုတ်ဖော်ပြသသည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏တိကျပြတ်သားသော သဘောတူညီမှုကို တောင်းခံပါမည်။
၁၀.၁ တစ်ကြိမ်သာ ဆိုင်းအင်ဝင်ခြင်း
သင်၏ တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ်မူတည်ပြီး၊ OAuth ဝန်ဆောင်မှုမှ ပံ့ပိုးထားသည့် လော့ဂ်အင်ဝင်နည်း အမျိုးမျိုးထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သင်လော့ဂ်အင် ဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများသည် သင်၏သက်သေခံ အထောက်အထား မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ပါလိမ့်မည်၊ သင့်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက် တစုံတရာ (သင်၏အမည်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ ကဲ့သို့သော) ကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် မျှဝေရန်၊ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုင်းအပ် ပုံစံတွင် ကြိုတင်ဖြည့်ပေးရန်အတွက် ရွေးချယ်စရာ ပေးပါလိမ့်မည်။ OAuth ဝန်ဆောင်မှုများက သင့်ကို ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို သင်၏ကွန်ရက်ရှိ အခြားသူများနှင့် မျှဝေရန်အတွက် သင်၏ ပရိုဖိုင် စာမျက်နှာတွင် တင်ရန် သို့မဟုတ် မတင်ရန် ရွေးချယ်ခွင့် ပေးပါသည်
အကယ်၍ သင့်တွင် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီနှင့်ပတ်သက်၍ သုံးသပ်ချက်များ သို့မဟုတ် မေးခွန်းများ ရှိလျှင်၊ သို့မဟုတ် သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်ကို Xiaomi ၏စုဆောင်း ရယူမှု၊ သုံးစွဲမှု သို့မဟုတ် အများပြည်သူကို ထုတ်ဖော်ပြသမှုနှင့် ဆက်စပ်၍ မေးစရာရှိလျှင်၊ ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ “ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီ”ကို ရည်ညွှန်းသည့် လိပ်စာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၏ ဝင်ရောက်အသုံးပြုမှု/ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မှု တောင်းဆိုချက်များ ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ ရရှိသည့်အခါ၊ သင်၏ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အသင်း တစ်သင်း ရှိပါသည်။ သင်၏မေးခွန်းကိုယ်၌တွင် သိသာသည့် ပြဿနာ ပါဝင်ပတ်သက်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ထပ် အချက်အလက်များ သိရှိရန် သင့်ကို မေးရပါလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ရရှိသည် ပြန်ကြားမှုကို မကျေနပ်ခဲ့လျှင်၊ သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်ထံ လွှဲပြောင်း တိုင်ကြားနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလျှင်၊ သင်၏အမှန်တကယ် တည်ရှိနေသည့်နေရာပေါ် မူတည်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သော သက်ဆိုင်ရာ တိုင်ကြားနိုင်သည့် ချန်နယ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်ကို ပေးပါမည်။
Xiaomi Singapore Pte. Ltd. 20 Cross Street, China Court #02-12 Singapore 048422 အီးမေးလ်- privacy@xiaomi.com
ဥရောပ စီးပွားရေး ဧရိယာရှိ သုံးစွဲသူများ အတွက် European Economic Area (EEA)- Xiaomi Technology Netherlands B.V. Room 04-106, Wework Strawinskylaan 4117 4th Floor, Atrium North Tower Amsterdam, 1017XD
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ပေါ်လစီကို အချိန်ပေးဖတ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။